Tag: inopindirana infographic | Martech Zone
Tag: inopindirana infographic
Mugadziri wedu anga achishanda nesimba, achangoburitsa vhidhiyo yehupenyu yeRight On Interactive. Kunze kwekunetseka kweiyo animation, kupa mamwe emavhidhiyo kunotora maawa kushandisa zvakajairika maturusi edesktop. Moovly (parizvino ari beta) anotarisira kuchinja izvo, achipa chikuva chinobvumira chero munhu kuti agadzire zvirinani mavhidhiyo ehupenyu, mabhenji kushambadzira, mharidzo dzekudyidzana uye zvimwe zvinomanikidza zvemukati. Moovly chishandiso chiri nyore pamhepo chinokutendera iwe kuti ugadzire zvemhuka zvine hupenyu usina
Mugovera, March 23, 2013 Douglas Karr
Tinoda Visual.ly yekutsvaga uye kugovana infographics. DK New Media mugadziri akasimbiswa paVisual.ly, aine toni yeakakura infographics isu tatsvaga, takagadzira uye takasimudzira vatengi vedu. Zvakare pamwe neiyo static infographics, timu yeVisual.ly inoenderera ichisimudzira yavo ine simba infographics futi… tarisa ichi chikuru Google Analytics infographic iyo inodhonza ako masvondo mavhiki mune yakanaka dhizaini. Iwe unogona kunyange kuti yako infographic iendeswe kwauri neemail pa